पोखरामा सेतो पुतलीकाे बिगबिगी,उपचार नपाए आँखाकाे ज्याेती गुम्ने - GalaxyPati
फार्क विद्रोहीको आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु
प्रदेश २ सरकारले प्रति व्यक्ति २ हजारको खाना खुवाउने नीति
भन्सार कार्यालय वीरगंजले आठ अर्ब राजस्व संकलन
अदालतले माग्याे ५० लाख धरौटी
१ हजार २८२ नयाँ संक्रमित थपिए
पोखरामा सेतो पुतलीकाे बिगबिगी,उपचार नपाए आँखाकाे ज्याेती गुम्ने
२०७८ भाद्र २७, आईतवार १८:३८
पोखरा २७, भदौ । पोखरामा सेतो पुतलीबाट लाग्ने रोग ‘सापु’ को बिगबिगी फेरि सुरु भएको छ । हिमालयन आँखा अस्पतालमा शनिबारसम्म ३० जनाभन्दा बढी विरामीले सापुको उपचार गराएका छन् ।
वर्षेनी ५० जना हाराहारीले यहाँबाट उपचार लिएका छन् । तर १० प्रतिशत विरामीको जटिल अपरेसन गरिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । ती विरामीको ज्योति फर्किने निश्चित छैन । केहीलाई धुलिखेल अस्पताल रिफर गरिएको छ भने अधिकांशको उपचार पोखरामै भइरहेको छ ।
२४ घन्टाभित्र उपचार नपाए विरामीको आँखा फर्किंदैन । सापु सार्ने पुतलीको शरीरमा बाक्लो झुस, शिरतिर तेर्साे र पखेटातिर ठाडो कालो धर्का हुन्छ । विशेषतः सेतो बत्तीमा यो बढी झुम्मिने भएकाले साँझतिर सेतो बत्ती नबाल्न विज्ञहरूले सुुझाव दिएका छन् ।
अस्पतालका चिकित्सक डा. इन्द्रमान महर्जन भदौको झरीपछि सेतो पुतली निस्किने गरेको बताउँछन् । ‘आँखा रातो हुने र कालो नानी सेतो हुन्छ । भदौको झरी सकिएपछि यो निस्किन्छ । भदौदेखि मंसिरसम्म रहन्छ,’ उनले भने, ‘सेतो बत्ती बढी मन पराउने गर्दो रहेछ । जाली लगाउने र रात धेरै परेपछि मात्रै बत्ती बाल्दा यो घरभित्र पस्न पाउँदैन ।’
यदि त्यस्ता पुतलीको झुससँग सम्पर्क भए तत्कालै अस्पताल जान उनको सुझाव छ । ‘जतिसक्दो छिटो उपचारमा पुग्नुपर्छ । नत्र आँखा नबँचेको उदाहरण पनि हामीसँग छ,’ उनले थपे, ‘बढीमा २-३ घन्टामा पुगिसक्नुपर्छ । अलि ढिलो गर्दा ज्योति सँधैका लागि गुमाउनुपर्छ ।’
आँखा दुख्ने र उज्यालोमा हेर्ने नसक्ने लक्षण सापुको हो । सापु संक्रमित आँखाको उपचारका लागि आँखामा पिप सुकाउने इन्जेक्सन लगाउने र पिप निकालेर फ्याँक्ने गरिएको महर्जनले बताए । केही वर्षअघिसम्म बच्चाहरूमा यो रोग देखिए पनि हिजाेआज वयस्कमा समेत रोग फेला परेको छ । सापुको जोखिम बढेपछि गण्डकी प्रदेशका अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूलाई यसको उपचारबारे तालिम दिइएको छ । सापु ०३२ सालमा पोखराबाटै उत्पत्ति भएको मानिन्छ । अहिले पोखरालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा पनि यसको जोखिम बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सरसफाइ र सावधानीका कारण बच्चाको तुलनामा वयस्कको उपचार सहज हुने चिकित्सक डा. हरिमाया गुरुङले बताइन् । अस्पतालका अनुसार अहिलेसम्म तीनजना विरामीको जटिल अपरेसन गरिएको छ भने पाँचजनाको आँखाको नानीभित्रै इन्जेक्जस लगाइएको छ । अरु भने आँखाको सेतो भागमा इन्जेक्सन लगाएर उपचार हुने गुरुङको भनाइ छ ।
सिजनल हाइपरएक्युट पानुभिआइटिस अर्थात् सापु रोगको संक्रमण सेतो पुतलीबाट हुने र त्यसबाट जोगिन सरसफाइमा बढी ख्याल गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूले बताए । साभार राजधानी दैनिक बाट लिएको समाचार हो ।